Alle Dartii Akhriste Ma ku kafaalo qaadan Kartaa Hablahan yar-yar ee Agoonta iyo Rajada ah?
Ex British P.Minster
SDWO Relief Projects (Hargeisa 15/03/2012) Shabakada Arimaha Samafalka iyo wararka ee Sdwo ayaa waxay shalay gaadhsiisay lacag dhan $100 Dollar (Boqol Dollar), lacagtan oo aheyd mid uu uugu soo deeqay Muwaadin degan London oo la yidhaah Cabdi Maxamed oo kamid ah akhristayaasha shabakada ayaa waxaa la gudoonsiiyey sidaad sawiradan ka arkeysaan labada hablood ee wallaalaha ah oo ah Agoon iyo Rajay ka dib markii aabahood iyo hooyadoodba dhinteen. Waxaana caruurtaas u soo gurmaday dad badan oo u soo diray deeqo lacageed oo kale duwan.
Hablahan yar-yar ee ay isku wehelisay waalid la,aanta iyo da,yaridu ayaa baryo ka hor shabakadu u soo bandhigtey akhristayaasheeda iyadoo isla markiiba uu kafaalo qaatey mid kamid ah akhristayaashu laakiin ka cudur daartey in la xusso magaciisa.
hablahan yar-yar ayaa waxaa hadda gacanta ku haysa ayeydood hooyo kadib markii ay labadoodii waalidba dhinteen, labada hablood yarta weyn oo magaceeda la idhaahdo kheyriya ayaa waxaa la geeyey iskuul, dhinaca yarta kale ay aad u yartay oo ay la joogto ayeydeed. waxaana loo kireeyey aqal iyadoo noloshoodu hadda ay tahay mid aad u fiican waxaanad ka garan kartaa is bar-bar dhiga labada sawwir ee ka hadda iyo kuwii hore.
Maanta iyo Sawirka labadii Hablood oo nolashoodu is bedeshay
Sawirkoogii Bil ka hor iyo dhibtii ay ku sugnaayeen
Labdii Hablood iyo Ayaydood oo nolol cusub galay
Hadii aad rabtid inaad SDWO aad ku soo hagaajisid sadaqadaada si aanu halkan ugu soo bandhigno sawirada marka la gudoonsiinayo, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa samafal@sdwo.com ama Guled@sdwo.com
SDWO (Hargeisa 12/02/2012) Isgad gadiga samanada sida sahlan ku mara saaxada dunida ayaa ah kuwo ka taga casharo cajabtooda iyo cibarkooda leh. Sanadan cusub ee 2012 ayaa la filayaa iney noqoto mid guud ahaan caalamka u horseeda bashbash iyo barwaaqo gaar ahaan dalalka Islaamka.
haddaba webka sdwo oo ah web inta badan ka shaqeeya arimaha daryeelka bulshada qeybaheeda tabaaleysan ayaa waxaa uu xafiiskiisa Magaalada Hargeisa soo gudbinayaa waxyaabihii uugu yaabka badnaa ee ka dhacay mid kamid ah xaafada danyarta magaalada hargeisa sanadkii 2010.
warbixintan ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa laba hablood oo yaryar kuwaas oo sidaad sawirkan ku aragtaan sanadkii tagay kala tagay ehelkoodii iyo dhaayahoodii kaas oo dhamaadkiisu la safray Hooyadood iyo Aabahood.
sanadkii tegay ee 2011 ayaa labadan hablood ee yaryar oo da,doodu tahay 6 iyo 3 jir u gali doona boga murugada noloshooda waxaanu noqon doonaa mid marka la soo hadal qaadaba xasuusiya waalidkoodii wacnaa.
layaab malaha geeridu waa xaq Alle ayaana qadaray iney sidani dhacdo laakiin geerida waalidka caruurtan ayaa aheyd mid aan sidaa u kala fogeyn marka adiga laftirkaagu maskaxdaada la kaashatana waad dareemi kartaa culeyska ay leedahay waalid la,aantu waliba caruur yaryar oo aan wali wajigihin waayaha nolosha.
haddaba waxay aheyd subax hore oo ay saacadu ku beegneyd 6:30 subaxnimo kadib markii aan booqdey guri buul ah oo laa ii soo sheegay iney dagen yihiin labadan hablood ee yaryar ee Agoonnimada iyo Rajeynimadu hayso.
iyada oo aan sawir ka haysto sida ay noloshoodu tahay ayaa waxaa ugu horeyntiiba indhaheygu ku dhaceen laba caruur ah oo aad u dayacan safradna la kacay iskuna mashquulinaaya qalab daasado ah oo ay ku ciyaarayeen si aaney u dareemin dhibta nolosha.
Caruurtan oo diifta iyo daranyada ka muuqata dushooda aad ka garaneyso garab la,aanta haysata ayaa waxaan isku dayey inaan la sheekaysto nasiib wanaag yarta roon ayaa aheyd mid si fiican u taqaan afsomaliga waxaanan ugu horeyntiiba waydiiyey xaaladooda nololeed iyo cida gacanta ku haysta hadda?
waxay iigu jawaabtey waxaanu dagannahay gurigan aad arkeyso xaaladayada nololeed waa hoosaysaa oo daryeel la,aan ayaa nahaysata.
dhaxamo aad u daran oo ka dhacaya magaalada hargeisa ayaa jira waxaanan waydiiyy sida dhaxantaas ay u saameyso iyo waxa ay ka huwadaan?
waxay iigu jawaabtey iyadoo qosleysa farxad badanina ka muuqato waxaanu ka huwanaa go. kadibna boga ayaanu iska galnaa mana dareeno. sidoo kale waxaan su.aaley yaa masuuliyadiina hadda haya?
waxaa haysa islaan noo ayeeyo ah taas oo xaafadaha nooga soo dawarsata waxaanan cunnaa wixii ay noo soo hesho kolba. caruurtan ayaa ah kuwa ka soo jeeda qoys danyar ah oo degan magaalada hargeisa.
cabaar yar kadib anaga oo wada sheekaysaneyna yartii ayaa waxaa noo timid islaan cad ah(am da,a ah), oo daal badan iyo diif badan huwan waxaaney yartu ii sheegtey iney tahay ayeydeed bac ay ku sidey cuntooyin kala duwan oo ay soo dawarsatay ayey caruurtii uugu yeedhay.
waxaan isku dayey inaan su.aalo waydiiyo islaanta laftirkeeda laakiin nasiib darro islaantu may aheyn mid afsomaliga taqaan waxaana iiga turjumay mid kamid ah danyarta kale ee xaafada.
waxaan waydiiyey islaanta su.aal ah sidee ayaad u aragtaa haddii caruurta aan kaala wareego oo aqalkeyga geeyo kana mid noqdaan awlaadeyda?
Hooyo way fiican tahay laakiin kama maarmayo waayo hooyadood iyo aabahood ayaa dhintay oo aan ka samray iyagana kama samri karo ee waxaan jecelahay iney inaga igula noolaadaan noloshan aad arkeyso ilaa iyo inta nasri Alle ka imanaayo?
waxaan su.aaley ka waran haddii qof islaam ahi kugu biiliyo caruurta ma ogolaaneysaa iney waxbarashada tagaan. haa Maashaa Allaah laakiin labada hablood ta yar ayaan ta weyn ka maarmayn oo way ooyeysaa haddii ay waydo.
waxaan ku noqdey jartii wayneyd waxaanan waydiiyey maxaad dareentaa markaad dariiqyada ku aragta gabdhaha yar yar ee da,daada ah una dareeraya goobaha waxbarasho?
waan murugoodaa laakiin danta ayaa ii run sheegta haddaan heli lahaana waxbaan baran lahaa waayo waxbarashada waan jeclahay.
haddaba ugu danbeyntii akhriste waxaanu si sharaf iyo karaamo leh kaaga codsaneynaa inaad soo kafaalo qaadato Caruurtan yaryar ee aanu ka waraney waayahooda nololeed adigoo Alle dartii wax ku taraaya.
waxaanad kala soo xidhiidhi kartaa
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Guled Abdi Sheekhaash - SDWO News Editor